ITEMPILE KACLAIRE IDLALA INDIMA EBALULEKILEYO KWINETFLIX ULUKE CAGE - JESSICA JONES
Ucarrie Anne Moss
** Abaphangi be UJessica Jones isizini 1 ukuba awukayibukeli okwangoku, kwimeko enjalo hamba uyokwenza ngoku. Ndiza kulinda.**
Ukuba ubukhathazekile ngokungabikho kukaLuke Cage kwiNetflix's UJessica Jones bonisa, ungalibali ukuba unomboniso wakhe ozayo, kwaye kufanelekile ukuba ube yimincili! Ukuba ubukhathazekile ukuba yena noJessica bengazange ngokwenene lungisa izinto ekugqibeleni, kulungile… wena unamandla ungonwabi ngendima eyandisiweyo kaRosario Dawson ULuka Cage , kodwa ndiqinisekile.
Umlingiswa wakhe omangalisayo, iTempile kaClaire, ibalasele kakuhle Daredevil Kwaye sele ndibonakele UJessica Jones ukunceda uLuka Cage aphume, kwaye kubonakala ngathi abo babini baya kwazana ngakumbi xa uLuka efumana owakhe umboniso. Kwi Udliwanondlebe no-IGN , UMike Colter (uLuka Cage ngokwakhe), uthe,
Ucelomngeni kumzobo 4
Uyazi ngam, ngokucacileyo, ngokwembono yakhe, kodwa kuya kuba mnandi ukubona kuba uya kujongana nam ngendlela eyahlukileyo kunaleyo wayephethe ngayo noMatt Murdock. Uhlobo lukaMatt Murdock lwahluke ngokupheleleyo kolwam.
Ngenxa yokuba udlala umongikazi obonakala ngokusisiseko ekwindawo elungileyo ngexesha elifanelekileyo, kwaye ulunge kakhulu ekuncedeni amaqhawe asweleyo, kwaye ndicinga ukuba uza kubona oko kuLuka Cage. Ekugqibeleni ndicinga ukuba uzakuba liqabane elilungileyo kuLuka. Ndicinga ukuba ngumntu ofunwa nguLuka ebomini bakhe ngeli xesha.
izizathu zokuba kutheni fanfiction imbi
Kodwa uza kuba njani ebomini bakhe, ethathela ingqalelo ukuba wayenomdla kuye kwiikhomikhi? Mhlawumbi akunjalo lonto kuninzi, kuthathelwa ingqalelo ukuba intloko ye-Marvel Television uJeph Loeb wongeze ukuba indima kaClaire kwimiboniso ye-Marvel TV yandisiwe nje ngokuba uDawson ungumdlali obalaseleyo. UColter wayenayo le nto yokuyithetha:
Ndikunye noJessica, yayiyenye yezo zinto xa udibana nenkanuko. Ndicinga noJessica, kuninzi kakhulu ngekhemistri apho kusafuneka sifumanise ukuba siyahambelana, kwaye yinxalenye eza kuba nomdla. Ngokubhekisele kuClaire, kufuneka silinde kwaye sibone ukuba olu lwalamano luza kwenzeka njani. Ngokuthelekisa, siyazi ukuba uJessica ubulele unkosikazi wam, kwaye ke kufuneka sidlule kuloo nto.
Ayenzi njalo isandi ngokungathi ngokuqinisekileyo baya kwicala lomdla wothando (olutshintsho oluhlaziyayo lwesantya, ukunyaniseka), kodwa kuya kufuneka silinde de umboniso ugqibe ukubetha izikrini zethu zeTV ukuze siqiniseke. Thina unako yithi sivumelana ngokupheleleyo malunga nokuba uRosario Dawson uyoyikeka kwimiboniso yeTV engummangaliso, kwaye umnqweno wendima yakhe yokwandisa uyafana.
(nge IGeekTyrant , Umfanekiso ngeMarvel / Netflix)
imbaleki blade 2049 uphononongo lwe-embargo
Umoya Omtsha Zealand
ixesha lokulala elingenanto lokugqibela 1
Zonke izikhonkwane zonyana ngokulandelelana
inkosi yamakhonkco esini
Ukuzingela ukubuyela kwincwadi notre dame ephela
UTomas injini yetanki yenyani mod
Isibindi somYuda onyelisa
ngabathandi be-crowley kunye ne-aziraphale